फेरियो ज्योतिको देखाउने शैली, के सुध्रेकै हुन् त् ज्योति !! – ताजा समाचार
फेरियो ज्योतिको देखाउने शैली, के सुध्रेकै हुन् त् ज्योति !!
गायनमा मात्र होर ड्रेसअपमा समेत भद्दा रहने र चर्चामा आउने गरेकी गायिका ज्योति मगरलाई तीज लागिसक्यो । त्यसैले त हिजोआज रातै साडीका तस्बिरले उनको सामाजिक सञ्जाल भरिन थालेको छ । तर, यसपालिको तीजमा ज्योति केही फरक देखिएकी छन् । सधैँ छोटा पहिरन लगाएर तीजको गीतमा अभिनय गर्ने ज्योति यसपालि शरीर नै ढाक्ने लामो साडीमा देखिएकी छन् ।
तिजले ज्योतिको उक्त पहिरनबाट एक सुधारमुलक संदेश दिएको पाइन्छ । एक तबरले हेर्ने हो भने ज्योति कुनै समय राम्रो गित गायनमा मस्त थिन् र पश्चात चर्चामा आउन पहिलो रोजाई बन्यो भद्दा शैली प्रतुत गर्ने, ड्रेसअप अनि मेकअप ।
हालै उनले सार्वजनिक गरेको नयाँ तीज गीतमा उनी रातो साडी लगाएर फिचर्ड छन् । २०७४ को ‘घण्टा बजाउँछु’ बोलको तीज गीतमा उनले साडी पहिरेकी थिइन् । तर, त्यो साडीमा पनि उनको जवानी छोपिएको थिएन तर यसपालिको तीजदेखि ज्योति सुध्रिएकी छन् ।
हुन त ज्योति पहिरनलाई लिएर त्यति कन्सस होइनन् । उनी धेरै त फ्रक लगाउन रुचि राख्छिन् तर तीजमै त हो, ज्योतिले पनि साडी लगाउने !
पहिला ज्योतीको पहिरन यस्तो हुन्थ्यो हेर्नुहोस २ तस्विर